Eminyakeni embalwa yokuqala yokuphila kwakhe ingane ikhula ngokushesha njengoba engasoze yahlakulela. Ngokwengqondo iminyaka engama-2-3, akashintshi nje ukusebenzisana kwakhe, amandla akhe nobukhali bakhe ukuze kube ngcono, kodwa futhi ubonisa impumelelo enkulu ekuthuthukiseni ingqondo, ukufunda ukuveza imicabango yakhe ngosizo lwelwimi lwakhe. Ngokwemvelo, wonke umzali ufuna ukusiza ingane yakhe ekufuneni kwakhe ukwazi izwe elikuzungezile. Izindlela ezehlukene zokufundisa nokuthuthukiswa kokuqala kwezingane zenziwa, ngenhloso efanayo abazali bathenga amathoyizi nezinye izinto ezilungiselelwe izingane zabo. Imbonini yezimpahla zezingane ithola amakhulu ezinkulungwane zezinto ezihlukene, ukuthengisa izinto ezintsha kumama nabesilisa, eziningi zazo ezizosetshenziswa izikhathi ezimbalwa kuphela. Phakathi kokuthola okunjalo kokusetshenziswa okungaqondakali kuyisihlalo esivamile sokugeza.
Lapho ingane isencane kakhulu, ukugeza kuvame ukuqhutshwa ezandleni zomama noma kumkhanda okhethekile. Muva nje, umbuthano okhethekile wokubhukuda, obeka entanyeni yengane, uye wathandwa.
Ngemuva kokuba umntwana eqala ukuhlala kancane, ungasebenzisa isihlalo sokugeza. Umama angakwazi ukukhulula izandla zakhe, kodwa konke kufanele akhonze ingane, ngoba ngisho nesihlalo esiphezulu nesigxilile asiqinisekisi ukuphepha okuphelele.
Ngemuva kwezinyanga ezimbalwa, izingane eziningi zikhuthele kakhulu, zama ukuma kule ndawo yokugeza. Ngemva kwesikhashana, omama abaningi bafanele babambe isihlalo ukuze umntwana angaphumi kahle.
Kukhona ukugqama okunye okunye: labo boomama, abanama-cubicle kuphela, abanakwenzeka ukuba bakwazi ukusebenzisa isihlalo sokugeza baby isikhathi eside, ngoba ngokuhamba kwesikhathi kuzoba lula ukuphuza ingane ngaphandle kwesha. Labo omama abangasebenzisa indlu yokugezela basesimweni esihle - uma umntwana Ukuhlala ngokuthula, ungasebenzisa isihlalo eside. Futhi abazali bezingane ezikhuthele kulula ukusebenzisa umjikelezo - izinsana eziningi zigebha ngenjabulo enkulu, ngaphandle kwalokho kusiza ukuthuthukisa imisipha.
Uma ngabe kunjalo ukhetho lwakho lwawa esihlalweni sokugeza, okokuqala, udinga ukunaka ukuthi isihlalo sokugeza sinzinzile nokuthi sinjani ngaphansi kokugeza. Izitulo eziningi zinamashukela akhethekile, afakwe ngaphansi kwebhabhu. Isihlalo esingasakazwa ezingxenyeni eziningana kungase, ngemuva kwesikhashana emva kokuthenga, nje kuhlukaniswe ngenxa yamasonto amaningi futhi Ukulwa, ngakho kulula ukuthenga imodeli yonke.
Yiqiniso, ingane izoba mnandi kakhulu uma ithoyizi elikhanyayo lakhiwe esihlalweni sokugeza. Ukugeza kungumgomo obaluleke kakhulu osiza izingane ukuthuthukisa nokufunda umhlaba. Amanzi ajwayelekile kakhulu azungeze umntwana ezinyangeni ezingu-9, ngenkathi esesesibelethweni sikamama, ekuqaleni usiza ukuvumelanisa ingane nezwe langaphandle, futhi kamuva lukhuni futhi lukhuni. Ngakho ukugeza nezesekeli kuye kungcono ukuba kunganakwa. Ngaphandle kwalokho, kuwumdlalo onjalo omnandi!
I-Arai iyisigqoko sokugibela isitayela. Indlela yokukhetha imodeli engcono kakhulu?
Umshayeli wezingane uBalu - induduzo nenani elifanele
Helena Rubinstein. Uyinki ukubukeka kwakwakhiwa kakhulu
Okunethezeka empumalanga. idolobha Dubai
Termomozaika: isikimu. Termomozaika 3D scheme: Smeshariki, New Year